कांग्रेसमा घम्साघम्सी : हिन्दु राष्ट्र कि धर्म निरपेक्षता ?
कृष्ण गिरी शुक्रबार, असोज २३, २०७७
अन्तरिम संविधान २०६३ मा पहिलाेपल्ट ‘धर्म निरपेक्षता’को मुद्दा समेटियाे । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । तर, कोइरालाका अगाडि हिन्दु धर्मकाे बहस फिक्का भयो । अथवा, हिन्दु धर्म हुनुपर्छ भन्ने मुद्दा त्यत्तिकै सामसुम भयो । र, अन्तरिम संविधानमा धर्म निरपेक्षता कायम भएकाे थियाे ।
त्यस्तै, २०७२ सालमा संविधान सभाबाट 'नेपालकाे संविधान' घोषणा हुँदा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए भने राष्ट्रपति रामवरण यादव थिए । जुन संविधानमा पनि धर्म निरपेक्षतालाई समेटिएकाे छ ।
महामन्त्रीले नै हिन्दु धर्म चाहिन्छ भन्न थालेपछि बिस्तारै पार्टीमा यो विषयले प्रवेश पाउन थालेको कतिपय कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन् ।
तर, यतिबेला संविधानको भावनाविपरीत कांग्रेसमा 'हिन्दु राष्ट्र' हुनुपर्ने माग गरिएकाे आरोप लगाइएकाे छ । जसकाे पक्ष–विपक्षमा छन् नेता तथा कार्यकर्ता ।
कांग्रेसमा हिन्दु धर्मको राजनीति
नेपाली कांग्रेस आफूलाई सधैं परिवर्तनको वाहक सम्झन्छ । २००७, ०४६ र ०६३ सालको परिवर्तनमा कांग्रेसको भूमिका उल्लेख्य रह्यो । तर, पछिल्लो समयमा भने कांग्रेसमाथि संविधानको विरुद्धमा अभियान सञ्चालन गर्न थालेको आरोप लगाइएकाे छ । केही नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण कांग्रेसले यस्तो मुद्दा उठाउन थालेको केन्द्रीय सदस्य फरमुल्लाह मन्सुर बताउँछन् ।
कांग्रेसमा हिन्दु धर्मको राजनीति पछिल्लो समयमा प्रवेश गराउन स्व. खुमबहादुर खड्काकाे विशेष हात छ । उनले संविधान जारी भएको १ वर्षपछि हिन्दु राज्य स्थापनाको अभियान चलाएका थिए । खड्का आफू सक्रिय राजनीतिमा लाग्न नपाए पनि उनको यो एजेन्डा कांग्रेसमा सुषुप्त रूपमा प्रवेश गर्‍यो ।
कांग्रेस सुरुबाट नै धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा हो । झन्डामा भएका चार तारामा एक ताराले धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रतिनिधित्व गर्छ ।
खड्काको निधनपछि हिन्दु धर्मको कुरा कांग्रेस महामन्त्री शेखर कोइरालाले उठाउन थाले । उनले अभियान नै नचलाए पनि धर्म निरपेक्ष होइन, हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ भन्दै सार्वजनिक सभा समारोहमा अभिव्यक्ति दिन थाले । महामन्त्रीले नै हिन्दु धर्म चाहिन्छ भन्न थालेपछि बिस्तारै पार्टीमा यो विषयले प्रवेश पाउन थालेको कतिपय कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन् ।
गत वर्ष काठमाडौंमा भएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा शेखर कोइराला, बालकृष्ण खाँण, शंकर भण्डारी र एनपी साउदले हिन्दु राष्ट्रबारे पार्टी स्पष्ट हुनुपर्ने माग राखेका थिए । उक्त बैठकमा कोइरालाले १४औं महाधिवेशनमा हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा बहुमतभन्दा बढी हुने मत राखेका थिए । भण्डारीले नै हस्ताक्षर गराएका थिए ।
आगामी महाधिवेशनमा हिन्दु राष्ट्रको मुद्दाबारे प्रस्ट हुने साउद बताउँछन् । उनले भने, ‘संविधानमा धर्म निरपेक्षता लेखेको भए पनि अब त्यो विषय संशोधन पनि हुन सक्छ । कांग्रेस सुरुबाट नै धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा हो । झन्डामा भएका चार तारामा एक ताराले धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रतिनिधित्व गर्छ ।’
महासमितिको बैठकमा धर्म निरपेक्षताका बारेमा कुरा उठेको छ । आधा महासमिति सदस्यले हस्ताक्षर नै गरेका छन् । यो कुरा अब महाधिवेशनमा जबर्जस्त ढंगबाट उठ्नेछ । जसमा पार्टीले स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउनेछ ।
२०७५ साल पुसमा भएको महासमितिको बैठकमा धर्म निरपेक्षताबारे पार्टी स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै हस्ताक्षर गरेका थिए । पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा भए पनि महासमितिको बैठकमा भने आधाजसो सदस्य धार्मिक राज्यको पक्षमा रहेको साउद बताउछँन् । उनले भने, ‘महासमितिको बैठकमा धर्म निरपेक्षताका बारेमा कुरा उठेको छ । आधा महासमिति सदस्यले हस्ताक्षर नै गरेका छन् । यो कुरा अब महाधिवेशनमा जबर्जस्त ढंगबाट उठ्नेछ । जसमा पार्टीले स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउनेछ ।’
कांग्रेसमा पछिल्लो समयमा धर्म निरपेक्षताभन्दा धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा युवाहरू नै लागेका छन् । उनीहरू आफ्नो पार्टीको झन्डामा रहेका चार तारामध्ये एक ताराले धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले पनि यसलाई जोगाउनुपर्ने मत राख्न थालेकाे साउद बताउँछन् ।
केही नेताहरू भने संविधानमा भएको धर्म निरपेक्षता राख्ने काममा कांग्रेसले सम्झौता गरेको बताउँछन् । कांग्रेसका केही नेताहरू धार्मिक स्वतन्त्रता भन्नाले परम्परागत रूपमा मानिएका धर्म, रीतिरिवाजलाई कायम गर्ने भन्ने अर्थ लगाउँछन् ।
केन्द्रीय सदस्य गोपालमान श्रेष्ठ भन्छन्, ‘धर्म निरपेक्ष र धार्मिक स्वतन्त्रताबीच भिन्नता छ । तर नेपालमा धर्म निरपेक्षताको आडमा लोभ लालच देखाएर करकापमा पारेर धर्म परिवर्तन गराउन थाले । जुन संविधानविपरीत काम हो । त्यही भएर धार्मिक स्वतन्त्रता भनेका हौं ।’
नेपाली कांग्रेसको कुनै पनि आधिकारिक बैठक अथवा समितिमा यसबारे बहस भएको छैन । न त कांग्रेस संविधानको विरुद्धमा नै जान्छ । जहाँसम्म केही व्यक्तिको कुरा छ, त्यो उनीहरूको विचार होला, पार्टीको होइन ।
२०६२/६३ आन्दोलनमा उठ्दै नउठेका कुरा पनि पछि अन्तरिम संविधान हुँदै २०७२ सालको संविधानमा राखेको कुरा श्रेष्ठ बताउँछन् । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘आन्दोलनमा कहीँ कतै धर्म निरपेक्षताको कुरा उठ्दै उठेन तर अन्तरिम संविधान हुँदै संविधानमा पुग्यो । त्यही भएर यस्ता कुराहरू संशोधन हुनुपर्छ ।’
अर्को पक्ष भने केही नेताहरूले हिन्दु धर्मको माग उठाएर संविधानविपरीत कुरा गरेको बताउँछन् । मन्सुर भन्छन्, ‘नेपाली कांग्रेसको कुनै पनि आधिकारिक बैठक अथवा समितिमा यसबारे बहस भएको छैन । न त कांग्रेस संविधानको विरुद्धमा नै जान्छ । जहाँसम्म केही व्यक्तिको कुरा छ, त्यो उनीहरूको विचार होला, पार्टीको होइन ।’
१४औं महाधिवशेनबाट धार्मिक स्वतन्त्रताबारे स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएपछि मात्र संसदमा अथवा आगामी निर्वाचनमा देशव्यापी रूपमा बहस गर्ने योजनामा यसका पक्षधरहरू रहेका छन् । उनीहरूको जोड छ– पार्टीले पहिला यो बारेमा स्पष्ट धारणा बनाओस् । अनि, मात्र आगामी निर्वाचनमा लैजाने बारेमा बहस हुने साउद बताउँछन् । साउद भन्छन्, ‘पहिला कांग्रेस प्रस्ट हुनुपर्‍यो । यसको छिनोफानो महाधिवेशनबाट हुनुपर्‍यो । महाधिवेशनबाट हिन्दु राज्य बनाउने कुरा पास भएपछि मात्र आगामी चुनावमा कांग्रेसको चुनावी एजेन्डा बन्छ ।’
कोइरालाका अगाडि हिन्दु धर्मकाे बहस फिक्का भयो । अथवा, हिन्दु धर्म हुनुपर्छ भन्ने मुद्दा त्यत्तिकै सामसुम भयो । र, अन्तरिम संविधानमा धर्म निरपेक्षता कायम भयाे ।
धर्म निरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्ष–वपक्षमा नेपाली कांग्रेसमा दुई धार छन् । यसमा साविकका तीन समूहभन्दा फरक किसिमको पक्ष विपक्ष रहेका छन् । महामन्त्री कोइरालाको आफ्नै समूह छ । तर, उनको यो मुद्दामा देउवा निकट साउदलगायतका युवाले साथ दिइरहेका छन् । जसमा पौडेल पक्ष र देउवा पक्षका युवा नेताहरू पनि छन् ।
मन्सुर भन्छन्, ‘कुन केन्द्रीय सदस्यले के बोल्यो, त्यो कांग्रेसले बोलेको होइन । कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यले बोलेको हो । जुन व्यक्तिगत धारणा हो । यस्ता धारणाले कांग्रेसको आधिकारिक धारणामा कुनै असर गर्दैन ।’
‘महासमितिको बैठकमा कुरा उठे पनि कार्यसमितिको बैठकले उक्त प्रस्ताव नै खारिज गरिदियो । अनि धर्म निरपेक्षता हुनुपर्छ भन्ने कुरा कसरी कांग्रेसको आधिकारिी धारणा भयो ?’ मन्सुर प्रतिप्रश्न गर्छन् ।
धार्मिक मुद्दा उठाएर कांग्रेसले चुनाव लड्दैन । कसैको धार्मिक भावनात्मक कुरालाई राजनीतिक मुद्दा बनाइनुहुन्न । धार्मिक कुरा कांग्रेसको राजनीति मुद्दाभन्दा विकासका कुरा प्रमुख हुन् ।
कांग्रेस अहिले धर्मका कारण नै आपसी अन्तर्विरोधमा फस्न थालेको छ । कांग्रेसको एक पक्ष भने धर्म निरपेक्षताको बारेमा जनमत संग्रह गर्न पार्टीलाई दबाब दिइरहेको छ । हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाका बारेमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सुरुबाट नै जनमत संग्रहको माग गर्दै आएको छ ।
कांग्रेसले माग गरेको जनमत संग्रह तत्काल हुन नसके पनि धर्म विवादित विषय बन्ने कांग्रेसका नेताहरू नै बताउँछन् । तीन नेताहरूको तर्क छ– आज धर्मको नाममा जनमत गराउँदा पछि अर्कोले चित्त नबुझेको अर्को कुरामा जनमतको माग गर्ला, यसरी जिम्मेवार पार्टीले नै संविधानका राम्रा कुरामा नै विवाद गरे विवादमुक्त हुन नै नसकिने अवस्था आउनेछ ।
केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले गत वर्ष नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठकमा नै धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन धर्म हुनुपर्छ भनेर हस्ताक्षर अभियान चलाएका हुन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा विभिन्न धर्ममा आस्था राख्ने मानिस भए पनि नेपालको पहिचान, समृद्धि र ऐतिहासिकता भएकाले हामीले यो कुरा उठाएका हाैं ।’
कांग्रेसको एक पक्ष विदेशीहरूले गर्दा धर्मनिरपेक्षता भएको आरोप लगाउँछन् । भण्डारी भन्छन्, ‘धर्म निरपेक्षता नेपालमा अस्थिरता फैलाउनेहरूले ल्याएको हो । हामीले संविधानको मस्यौदा समितिमा बसेकाले असहमति राखेका थियाैँ । तर त्यो लागु हुन सकेन । तर कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा हामी धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा पास गरेर जान्छाैं ।’
पहिला कांग्रेस प्रस्ट हुनुपर्‍यो । यसको छिनोफानो महाधिवेशनबाट हुनुपर्‍यो । महाधिवेशनबाट हिन्दु राज्य बनाउने कुरा पास भएपछि मात्र आगामी चुनावमा कांग्रेसको चुनावी एजेन्डा बन्छ ।
मन्सुर भन्छन्, ‘धार्मिक मुद्दा उठाएर कांग्रेसले चुनाव लड्दैन । कसैको धार्मिक भावनात्मक कुरालाई राजनीतिक मुद्दा बनाइनुहुन्न । धार्मिक कुरा कांग्रेसको राजनीति मुद्दाभन्दा विकासका कुरा प्रमुख हुन् ।’
पछिल्लो समयमा दुई पार्टीबीच एकता भएर बनेको नेकपासँग कांग्रेसले कुनै पनि हालतमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अनुमान गरेका केही नेताले यही धार्मिक एजेन्डालाई आगामी चुनावका लागि छनोट गरेको आरोप पनि लाग्न थालेको छ । तर भण्डारी भने यो कुरा मान्न तयार छैनन् । धर्म, जात र भाषामा वैदेशिक हस्तक्षेप बढेकाले हिन्दु सनातन धर्मको पक्षमा आफूले पार्टीभित्र अभियान चलाएकाे भण्डारीको भनाइ छ ।
तर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व पंक्तिले भने यस विषयमा अहिलेसम्म कहीँ कतै बोलेको छैन । नेपाली कांग्रेसमा भएका मुस्लिम, जनजाति र अन्य धर्म मान्नेहरू भड्किन सक्ने अवस्था आउन सक्ने अनुमान लगाएको कांग्रेस नेतृत्व ‘हेर र पर्ख’को अवस्थामा छ । मन्सुर पार्टीमा धार्मिक मुद्दाले विग्रह नै ल्याउने तर्क गर्छन् ।
#काँग्रेस #महाधिवेशन #हिन्दु #धर्मनिरपेक्षता
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज २३, २०७७ २१:५२